Duplicati ngwa magburu onwe ya iji mee bakcups na sistemụ gị Site na Linux
Ọtụtụ ndị anaghị eme nkwado ndabere oge, n'ihi na ngwaọrụ dị iche iche maka ọrụ a dị mgbagwoju anya ma ọ bụ n'ihi na ha enweghị oge zuru ezu. Ọ bụ ya mere taa anyị ga-eji kwuo maka ngwa dị mfe ma dị ike nke na-enyere anyị aka n'ọrụ a.
Ngwaọrụ anyị ga-ekwu maka ya taa bụ Duplicati. Nke a bụ ihe dị mfe ma n'otu oge ahụ ngwa ọrụ dị elu nke nwere ike idozi nsogbu gị ndabere.
1 Banyere Duplicati
2 Etu esi etinye Duplicati na Linux?
Oyiri bụ ihe mepere emepe ma nwee ikikere n'okpuru (LGPL), Duplicati edere na C # ma dị maka Windows, Linux, na Mac OS X, yana ntụgharị na Bekee, Spanish, French, Danish, Portuguese, Italian, na Chinese.
.Nnɛ ọ bụ ihu ọma a free ndabere ahịa na-echekwa na ntukwasi-obi iji izo ya ezo, nkwado ndabere na mpaghara, ọrụ nchekwa igwe abịakọ, yana sava faịlụ dịpụrụ adịpụ.
Na-arụ ọrụ na Amazon S3, Windows Live SkyDrive (OneDrive), Google Drive (Google Docs), Rackspace Cloud File ma ọ bụ WebDAV, SSH, FTP (na ọtụtụ ndị ọzọ).
Duplicati nwere sistemụ oge dị n'ime, yabụ ọ dị mfe ịnwe nkwado ndabere oge niile.
Ọzọkwa, ihe omume ahụ na-eji mkpakọ faịlụ ma nwee ike ịchekwa nkwado ndabere iji chekwaa ohere nchekwa na bandwit.
Emebere Duplicati site na izo ya ezo AES-256 na nkwado ndabere na mpaghara nwere ike banye na iji GNU Privacy Guard.
Generalfọdụ n'ozuzu atụmatụ nke a ndabere software bụ:
Bụ ngwa ikpo okwu. Ọ dị maka sistemụ arụmọrụ kachasị, Gnu / Linux, Microsoft Windows, MacOS.
Na-ekweta usoro ntanetị dị iche iche maka nkwado ndabere, ntụgharị WebDAV, SSH, FTP, wdg.
Ngwa a na-eji Izo ya ezo AES-256 ka izo ya ezo ndabere data.
Na-akwado iche iche igwe ojii ọrụ ịchekwa data ntụgharị Google Drive, Mega, Amazon Cloud Drive, wdg.
Enye ohere ndabere nke nchekwa, ụdị akwụkwọ dị ka akwụkwọ ma ọ bụ ihe oyiyi, ma ọ bụ omenala nyo iwu.
Nzacha, hichapụ iwu, nyefee nhọrọ na bandwit, wdg.
Onebụ otu ngwa weebụ Anyị nwere ike ịnweta ngwa ahụ n'ebe ọ bụla, ọbụlagodi site na mkpanaka.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Duplicati na-enye nhọrọ na ntọala dị iche iche, dị ka nzacha, iwu mwepu, nyefe, na nhọrọ bandwidth maka ịme nkwado ndabere maka nzube ụfọdụ.
Etu esi etinye Duplicati na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwá ọrụ a na nkesa Linux, Ha nwere ike ime ya site na isoro ntuziaka anyị na-eke n'okpuru.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ngwa ebe ọ na ngalaba nbudata ya, anyị nwere ike ịnweta nsụgharị nke ọhụrụ. Anyị nwere ike ime nke a na esonụ njikọ.
Ugbu a maka ikpe nke ndị bụ ndị ọrụ nke Debian, Ubuntu, Linux Mint na nkwekọrịta nwere ike iwunye ngwa a site na nbudata ngwugwu ụgwọ ụgwọ kachasị ọhụrụ (n'oge a ọ bụ ụdị 2.0.4.15) nke anyị ga - ebudata na iwu wget dị ka ndị a:
Ozugbo ebudatara nbudata ahụ, ịnwere ike ịwụnye ngwugwu arụnyere ọhụrụ na njikwa njikwa kachasị amasị gị ma ọ bụ site na njedebe onwe ya site na ịpị iwu ahụ:
Ma ọ bụrụ na enwere nsogbu na ịdabere na ya, enyere ha iwu na iwu:
Maka ndị bụ Fedora, CentOS, RHEL, openSUSE ma ọ bụ sistemụ ọ bụla ọzọ nwere ndị ọrụ nkwado RPM ga-ebudata ngwungwu RPM na:
N'ikpeazụ, anyị ga-arụ nwụnye ahụ na iwu:
N'ikpeazụ, maka onye ọ bụla Arch Linux, Manjaro Linux, Antergos ma ọ bụ ndị ọ bụla Arch Linux na-ekesa ndị ọrụ ga-enwe ike iwunye ngwa a site na nchekwa AUR.
Naanị ha kwesịrị ịwụnye ọkachamara ọkachamara AUR ma nwee nchekwa nchekwa a na sistemụ ha. Ọ bụrụ na ịnweghị nke a, ị nwere ike ịkpọtụrụ esote post.
Iji wụnye, ị ga-agba ọsọ iwu na-esonụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Duplicated ihe ngwa magburu onwe ya iji mee bakcups na sistemụ gị
Leo Jimenez dijo
Anọ m na-anwale ngwá ọrụ ahụ ruo ọtụtụ izu. Ọ pụtara maka ịbụ OpenSource, n'efu, multiplatform, ọtụtụ ebe na mfe. Ọ na-enye ohere maka nkwado ndabere na iweghachi faịlụ dịkwa mfe, ma na ụzọ izizi ma ọ bụ na ndekọ ọzọ.
Zaghachi Leo Jiménez
M na-eji oku Restic ugbu a. Ọ bụ a "deduplication" ngwá ọrụ, yiri nnọọ borgbackup, free software, e dere na laa, multiplatform, ngwa ngwa na ụzọ isi mee nkwado ndabere na mpaghara bụ nnọọ adaba. Nwere ike iji otu nchekwa maka ọtụtụ ụsụụ ndị agha. Anọ m na-eji ngwá ọrụ a maka otu afọ ma a na-atụ aro ya nke ukwuu. Ọ dị ezigbo mma. https://restic.net/
Zaghachi na DarkoFlores
GNOME 3.32: nsụgharị ọhụrụ nke desktọọpụ ebe obibi na ihe ịtụnanya
SIGESP: Sistemụ Njikwa Ọha na-achịkwa - Privatelọ Ọrụ Na-ere Ihe Na-ere Ihe Na-efu